လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် (၉/၂၀၂၀)အတွင်းမြို့နယ်အလိုက် ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ ထိန်းသိန်းပြုပြင်ခြင်း၊ သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ နေရာများတွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်-
ဖီဒါ အမည် ESE ခွဲရုံ
ခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ မကွေး သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၁၆.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ ရပ်ကွက်(၅)ရပ်ကွက်၊
ခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ ဆည်မြောင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၁၆.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ တန်(၃၀)၊စက်မှုတိုင်း(၃)၊ ထီးစက်ရုံ၊ မီးသွေးတောင့်၊ မကြီးကန်၊ ဆားတိုင်ကန်၊
မြင်းကင်း မြင်းကင်းခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ ဆည်မြောင်း-၂ သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၁၉.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ ရွာ(၂)ရွာ၊ရပ်ကွက်(၃)ရပ်ကွက် ခရိုင်ရေအရင်းအမြစ်၊ ဆ/မထိန်းပြင်၊ အသေးစား စက်မှုလက်မှု၊ သမဝါယမ သင်တန်းကျောင်း၊ တိုင်းရင်း ဆေးရုံ၊ လွှတ်တော် အိမ်ရာဝန်း (မြင်းကင်း)……၊
မကွေး လွှတ်တော်ခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ မြို့ရှေ့-၂ သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၂၀.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ ရပ်ကွက်(၅)ရပ်ကွက်၊ ပြည်တော်သာလမ်းမ ဧရိယာ များ (ခတ္တာ၊ပိတောက်၊ သုခိတာ၊ မြတ်လေးလမ်း မှ ဇီဇဝါလမ်းထိ)
မကွေး နတ်မောက်လမ်းခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ မြသလွန် သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၂၂.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ မြို့ဟောင်း၊ ဆုံရပ် ၊သိင်္ဂါ၊ မြို့မအိုးဘို၊ ရွာသစ်ပွဲကြို (မဲထီး ၁၄၊၁၅၊၁၆၊ ၁၇ လမ်းနှင့် နတ်မောက်လမ်း တ လျောက်)၊စံပြရုပ်ရှင်ရုံ...။
၆ မကွေး မကွေး မကြီးကန်
မကွေး လွှတ်တော်ခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ ကျေးရွာ သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၂၄.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ ရွာ(၇)ရွာ၊ရပ်ကွက်(၅) မြင်သာ (ဗန္ဓာပင်လမ်း၊သစ္စာလမ်းအရှေ့ဘက်နှင့်မဲထီးလမ်းတောင်ဘက်
၇ မကွေး မကွေး မကြီးကန်
ခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ ဆေးတက္ကသိုလ် သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၂၆.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ ​လေဆိပ်၊ဆေးတ္ကသိုလ်/ သင်ကြားရေးဆေးရုံ၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ စမ်းကန်ရွာ ၊ ဘုရားပြိုရွာ....။
၈ မကွေး မကွေး မကြီးကန်
မကွေး လွှတ်တော်ခွဲရုံ ၁၁ကေဗွီ မြို့ရှေ့-၂ သစ်ပင်သစ်ကိုင်း များ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ခြင်း၊ Jumper Connection များ ပြုပြင်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊လိုင်း အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း ၂၉.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ ရပ်ကွက်(၅)ရပ်ကွက်၊ ပြည်တော် သာလမ်းမ ဧရိယာ များ (ခတ္တာ၊ပိတောက်၊ သုခိတာ၊မြတ် လေးလမ်း မှ ဇီဇဝါလမ်းထိ)
မြင်ကွန်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်း လင်းခြင်းနှင့် ထိန်း/ပြင်လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၂၁.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၃:၀၀ ၀၅:၀၀ ရွာ(၁၇)ရွာနှင့် မြို့ပေါ်
၁၀ မကွေး မြင်ကွန်း (၁၃၂/၃၃/၁၁) ကေဗွီ မကြီးကန်ပင်မ
မြင်ကွန်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်း လင်းခြင်းနှင့် ထိန်း/ပြင်လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၂၇.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၃:၀၀ ၀၅:၀၀ ရွာ(၁၇)ရွာနှင့် မြို့ပေါ်
စက်မှုဇုန် သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ Jumper Connection များပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြွေသီးများလဲလှယ်ခြင်း ၁၇.၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀ ၁၄:၀၀ ၅:၀၀ ရပ်ကွက်(၂)၊ ကျေးရွာ(၁)၊ စက်မှုဇုန်(၁)
မြို့ပတ်လမ်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊Jumper Connection များပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြွေသီးများလဲလှယ်ခြင်း ၂၄.၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀ ၁၄:၀၀ ၅:၀၀ ရပ်ကွက်(၃)၊ ကျေးရွာ(၁)
ချောက် ၁၁ကေဗွီ ဂွေးချို ၂၀၁၉-၂၀ မိန်းဘတ် ဂျက်ပါ ACSRမှAWOC
ဆောက်ရန် ၁၆.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်နှင့်
ဆောက်ရန် ၁၈.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်နှင့်
ဆောက်ရန် ၂၀.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်နှင့်
ဆောက်ရန် ၂၂.၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀ ၁၅:၀၀ ၀၇:၀၀ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်နှင့်
ကြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀မိန်းဘတ်ဂျက်ပါ တောင်တွင်းကြီး-မကွေးလမ်း ၁၁ကေဗွီ SAC ကြိုးဖြင့် (၂)မိုင်အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ၁၆.၉.
၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၄:၀၀ ၆:၀၀ မြို့ပေါ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ(၁၀)ရွာနှင့် ခ.လ.ရ(၁၀၃) စစ်တပ်
ကြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀မိန်းဘတ်ဂျက်ပါ တောင်တွင်းကြီး-မကွေးလမ်း ၁၁ကေဗွီ SAC ကြိုးဖြင့် (၂)မိုင်အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ၁၉.၉.
ကြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀မိန်းဘတ်ဂျက်ပါ တောင်တွင်းကြီး-မကွေးလမ်း ၁၁ကေဗွီ SAC ကြိုးဖြင့် (၂)မိုင်အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ၂၂.၉.
၂၀ မကွေး တောင်
ကြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀မိန်းဘတ်ဂျက်ပါ တောင်တွင်းကြီး-မကွေးလမ်း ၁၁ကေဗွီ SAC ကြိုးဖြင့် (၂)မိုင်အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ၂၆.၉.
၂၁ မကွေး မင်းဘူး မန်းဓာတ်အား ပေးစက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33kV
Feeder-3 33/11kV (10)MVA မင်းဘူးခွဲရုံ 11 kV Feeder-3 လိုင်းရှင်းသစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း။ ၁၉.၉.၂၀၂၀ 8:00 13:00 5:00 ရပ်ကွက် (၁)ခု၊ ကျေးရွာ(၄) ရွာ
Feeder-3 33/11kV (10)MVA မင်းဘူးခွဲရုံ 11 kV Feeder-2 လိုင်းရှင်းသစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း။ ၂၆.၉.၂၀၂၀ 8:00 13:00 5:00 ရပ်ကွက် (၂)ခု၊ကျေးရွာ (၈)ရွာ
၂၃ မကွေး စကု မန်းဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33 KV ဖီဒါ(၁) ပွင့်ဖြူ 33/11kV (10)MVA ထနောင်း တောခွဲရုံ 11 kV ထနောင်းတော-စကု ဖီဒါ ၁၁ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကြိုးလဲခြင်း။ ၁၉.၉.၂၀၂၀ 8:00 18:00 10:00 ရပ်ကွက် (၃)ခု၊ကျေးရွာ (၇)ရွာ
၂၄ မကွေး စကု မန်းဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33 KV ဖီဒါ(၁) ပွင့်ဖြူ 33/11kV (10)MVA ထနောင်း တောခွဲရုံ 11 kV ထနောင်းတော-စကု ဖီဒါ ၁၁ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကြိုးလဲခြင်း။ ၂၆.၉.၂၀၂၀ 8:00 18:00 10:00 ရပ်ကွက် (၂)ခု၊ကျေးရွာ (၈)ရွာ
၂၅ မကွေး ပွင့်ဖြူ ကြီးအုံကြီးဝ ရေအားစက်ရုံ 11 kV ဆည်တော် feeder ၁၁ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း။ ၂၀.၉.၂၀၂၀ 8:00 16:00 8:00 ကျေးရွာ (၁၃)ရွာ
၂၆ မကွေး ပွင့်ဖြူ မန်းဓာတ်အား ပေးစက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33 KV ဖီဒါ(၁) ပွင့်ဖြူ 33/11KV 10MVA ပွင့်ဖြူခွဲရုံ Feeder-2 မြို့တွင်း ၁၁ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း။ ၂၁.၉.၂၀၂၀ 8:00 14:00 6:00 ရပ်ကွက် (၃)ခု၊ကျေးရွာ (၁၈)ရွာ
၂၇ မကွေး ပွင့်ဖြူ မန်းဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33 KV ဖီဒါ(၁) ပွင့်ဖြူ 33/11KV 10MVA ပွင့်ဖြူခွဲရုံ Feeder-3 ရှောက်တော ၁၁ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း။ ၂၃.၉.၂၀၂၀ 8:00 14:00 6:00 ရပ်ကွက်(၁)ကျေးရွာ(၃၃) ရွာ၊ရေ တင်(၂)
၂၈ မကွေး ပွင့်ဖြူ မန်းဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33 KV ဖီဒါ(၁) ပွင့်ဖြူ 33/11KV 10MVA ပွင့်ဖြူခွဲရုံ Feeder-4 လယ်ကိုင်း ၁၁ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း။
ကြွေ သီးလဲခြင်း။ ၂၅.၉.၂၀၂၀ 8:00 14:00 6:00 ကျေးရွာ (၇၇)ရွာ၊ရေ တင်(၁)
၂၉ မကွေး စလင်း မန်းဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ 132/33/11kV (50)MVA 33 KV ဖီဒါ(၁) ပွင့်ဖြူ 33/11kV (10)MVA စလင်းခွဲရုံ 11 kV စလင်း- ကံပြား Feeder သစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင် ရှင်း လင်းခြင်း၊ကြွေသီးကွဲ လဲလှယ် ခြင်း။ ၂၇.၉.၂၀၂၀ 8:00 12:00 4:00 ရပ်ကွက် (၅)ခု၊ ကျေးရွာ(၁၇)ရွာ
၃၀ မကွေး ဆင်ဖြူကျွန်း တညောင်ပင်မ ဓာတ်အားခွဲရုံ 132/66/11 kV (60)MVA 66 kV တညောင်ဖီဒါ 66/11kV (10)MVA ဆိပ်ဖြူခွဲရုံ 11 kV ဆိပ်ဖြူ- တညောင် Feeder သစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင် ရှင်း လင်းခြင်း၊ကြွေသီးကွဲ လဲလှယ် ခြင်း ဆောင်ရွက် ပါမည် ၂၀.၉.၂၀၂၀ 8:00 12:00 4:00 ကျေးရွာ(၃၀)ရွာ
၃၁ မကွေး ငဖဲ မန်းဓာတ်အား ပေး စက်ရုံ 132/66/11kV (40)MVA 66 kV ကပစ(၁၄)ဖီဒါ 66/11 kV (20)MVA ကပစ(၁၄) 11 kV ပဒါန်းFeeder သစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ တိုင်မတ်ခြင်း။ ၂၀.၉.၂၀၂၀ 8:30 15:30 7:00 ကျေးရွာ(၂) ရွာ
ပခုက္ကူ ပခုက္ကူခွဲရုံ (၂) အနောက် မြို့တွင်း လိုင်းထိန်းပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ၁၉.၉.၂၀၂၀ 9:00 13:00 4:00 ရပ်ကွက်(၄)
၃၃ မကွေး ပခုက္ကူ ​ဗုဒ္ဓကုန်း ဗုဒ္ဓကုန်း+
ပခုက္ကူ ပခုက္ကူခွဲရုံ (၁) အရှေ့မြို့တွင်း ထင်းတန်းလမ်းတိုးချဲ့မှု ကြောင့် လမ်းမပေါ်ရောက်နေ သော တိုင်များအား ဖယ်ရှားရန် ၂၃.၉.၂၀၂၀ 9:00 13:00 4:00 ရပ်ကွက်(၆)
၃၄ မကွေး ပခုက္ကူ ​ဗုဒ္ဓကုန်း ဗုဒ္ဓကုန်း+
ပခုက္ကူ ပခုက္ကူခွဲရုံ (၁) ရပ်ကျေး
ဗုဒ္ဓကုန်း load များနေသော ဗုဒ္ဓကုန်းဖီဒါအား ရပ်ကျေးဖီဒါသို့ load မျှရန် ၂၇.၉.၂၀၂၀ 9:00 13:00 4:00 ရပ်ကွက်(၆)
၃၅ မကွေး ရေစကြို ​ဗုဒ္ဓကုန်း ဗုဒ္ဓကုန်း+
ပခုက္ကူ ပခန်းကြီး - ရေစကြိုမြို့နယ်ရှိ ပခန်းကြီးဓာတ်အားခွဲရုံတွင် Control Pannel များအား သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုင်းအရင်း DS connection အဝင်အထွက်ကြိုးများအား AWOCဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ၂၆.၉.၂၀၂၀ 8:30 12:30 4:00 မြို့ပေါ် (၈)ရပ်ကွက်၊
၃၆ မကွေး မြိုင် ကျွန်းချောင်း ၆၆ ကေဗွီ
-မြိုင် ၁၁ကေဗွီလိုင်း ကြွေသီးကွဲ လဲလှယ်ခြင်း၊သစ်ပင် သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်
ရှင်းလင်းခြင်း၊ pole head တပ်ဆင်ခြင်း။ ၁၆.၉.၂၀၂၀ 8:00 11:00 5:00 ရပ်ကွက်(၃) ရပ်ကွက်၊
၃၇ မကွေး ​ပေါက် ပေါက် ‌ချောင်းကူး သရက်တော ‌ပေါက် ပေါက်မြို့အထွက် recloser ပိတ်၍ သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကြွေသီးကွဲလဲလှယ်ခြင်း ၂၃.၉.၂၀၂၀ 8:00 12:00 4:00
၃၈ မကွေး ​ပေါက် ပေါက် ‌ချောင်းကူး သရက်တော ‌ပေါက် သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကြွေသီးကွဲလဲလှယ်ခြင်း ၃၀.၉.၂၀၂၀ 8:00 12:00 4:00 မြို့ပေါ်(၄) ရပ်ကွက်၊
၃၉ မကွေး ဆိပ်ဖြူ တညောင် ဆိပ်ဖြူ ဆိပ်ဖြူခွဲရုံ ဖီဒါ-၁ သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်
ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် connection point စစ်ဆေးခြင်း ၂၂.၉.၂၀၂၀ 7:00 12:00 5:00 ရပ်ကွက်(၄)ရပ်ကွက်
၄၀ မကွေး ကမ္မ ကျွန်းချောင်း ကျွန်းချောင်း+
ရှင်းလင်းခြင်း၊loose connection များ ပြုပြင်ခြင်း ၁၈.၉.၂၀၂၀ 8:00 14:00 6:00 ရပ်ကွက်(၉) ရပ်ကွက်၊
၄၁ မကွေး ကမ္မ ကျွန်းချောင်း ကျွန်းချောင်း+
ရှင်းလင်းခြင်း၊loose connection များ ပြုပြင်ခြင်း ၂၉.၉.၂၀၂၀ 8:00 14:00 6:00 ရပ်ကွက်(၃) ရပ်ကွက်၊
၄၂ မကွေး မြစ်ခြေ ကျွန်းချောင်း ၆၆/၁၁ကေဗွီ
ကျွန်းချောင်းခွဲရုံ Inter Bus မြစ်ခြေ ကြွေသီးကွဲလဲလှယ်ခြင်း၊ အလယ်ကြွေသီးမြှင့်တင်ခြင်း၊သစ်ပင်သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ခြင်း၊
တိုင်မတ်ကြိုးတင်းခြင်း ၂၀.၉.၂၀၂၀ 8:00 13:00 5:00 မြို့ပေါ်(၈)ရပ်ကွက်
၄၃ မကွေး သရက် ‌တောင်တွင်း က.ပ.စ
အမ်ဗွီအေ သရက်ခွဲရုံ မြို့တွင်း
ဖီဒါ(၁) (၁၁)ကေဗွီ ဓာတ်အား လိုင်းထိန်းသိမ်းပြုပြင် ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရန် ၂၇.၉.၂၀၂၀ 8꞉00 15꞉00 7:00 ရပ်ကွက်(၈)ရပ်ကွက်
၄၄ မကွေး အောင်လံ တောင်တွင်း က.ပ.စ
(၈) အောင်လံ မင်းကြိုက် အောင်လံမြို့၊ မင်းကြိုက် ဖီဒါရှိလိုင်းခန်း(၃)ခန်း အား ACSR 35mm² ကြိုး အစား Insulated 95mm²ကြိုးဖြင့်လဲလှယ် ခြင်း ၂၀.၉.၂၀၂၀ ၉:၀၀ ၁၂:၀၀ ၃:၀၀ ရွာထောင်
၄၅ မကွေး အောင်လံ တောင်တွင်း က.ပ.စ
(၈) အောင်လံ မြို့တွင်း အောင်လံမြို့၊ မြို့တွင်း ဖီဒါရှိ ရေနံကြီး ကျေးရွာ ထရန်စဖော်မာ အား Earth ချခြင်းလုပ်ငန်း ၂၇.၉.၂၀၂၀ ၉:၀၀ ၁၂:၀၀ ၃:၀၀ ​ဇေယျဝတီ၊ စျေးကုန်း၊ တရော်ကုန်း ကွက်သစ်၊ မကျီးကုန်း၊ ရေနံကြီးကျေးရွာ၊ မိုးဖုန်း၊ ပုဏ္ဏား၊ ကြို့ပင်၊ မိုးကောင်း၊ ဂွေးကုန်း၊ ဂေါင်ဂင်၊ ရွှေသူဌေး၊ မြွေရိုး
၄၆ မကွေး မင်းလှ မန်းစက်ရုံ ဖီဒါ-၄ မင်းလှခွဲရုံ ဖီဒါ(၁) (၃၃)ကေဗွီလိုင်း သစ်ပင် သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်း လင်းခြင်း ၂၀.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ မြို့ပေါ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ(၂၇)ရွာ
၄၇ မကွေး မင်းလှ မန်းစက်ရုံ ဖီဒါ-၄ မင်းလှခွဲရုံ ကျေးရွာဖီဒါ (၃၃)ကေဗွီလိုင်း သစ်ပင် သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်း လင်းခြင်း ၂၇.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ မြို့ပေါ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ(၂၇)ရွာ
၄၈ မကွေး ဆင်ပေါင်ဝဲ တောင်တွင်း ကပစ(၈) ကိုးပင်
ခွဲရုံ ကိုးပင်ဖီဒါ ဧကရာဇ် ကျေးရွာ မှ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာအထိ
( ၁၁ )ကေဗွီလိုင်း
တစ်လျှောက်သစ်ပင်သစ် ကိုင်းများခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်း၊ Jumper
Connectionများစစ်ဆေး ပြုပြင်ခြင်း ၁၉-၉-၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ ကျေးရွာ(၅)ရွာ
၄၉ မကွေး ဆင်ပေါင်ဝဲ တောင်တွင်း ကပစ(၈) ကိုးပင်
ခွဲရုံ ဆင်ပေါင်ဝဲ ဖီဒါ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့၊ လှေ၀န်း ရွာသစ်ကျေးရွာ (၁၀၀) kVA Tr; (၄၀၀)ဗို့ လိုင်း ရှင်းလင်းခြင်း၊Jumper Connection များစစ်ဆေး ပြုပြင်ခြင်း ၂၆-၉-၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ လှေ၀န်းရွာသစ်
၅၀ မကွေး ကံမ ဥသျှစ်ပင် ကံမ-
မင်းတုန်း ကံမခွဲရုံ ကံမဖီဒါ (၁၁)ကေဗွီလိုင်း သစ်ပင် သစ်ကိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်း လင်းခြင်း ၁၉.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၃:၀၀ ၅:၀၀ ကံမမြို့နယ်မီးသုံးသူအားလုံး
၅၁ မကွေး မင်းတုန်း ဉသျှစ်ပင် ကံမ-
ခွဲရုံ တံတား ဖီဒါ မင်းတုန်းခွဲရုံမှမြောင် ကျေးရွာအထိ(၁၁)ကေဗွီ လိုင်းတစ်လျောက် သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း Jumper Connection များ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း ၁၉-၉-၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ ကျေးရွာ(၃)ရွာ
၅၂ မကွေး မင်းတုန်း ဉသျှစ်ပင် ကံမ-
ခွဲရုံ မင်းတုန်း ဖီဒါ မင်းတုန်းခွဲရုံမှအမှတ်(၁) အထိ(၁၁)ကေဗွီလိုင်း တစ်လျောက်သစ်ပင်သစ် ကိုင်းများခုတ်ထွင်ရှင်း လင်းခြင်းJumper Connectionများစစ်ဆေး ပြုပြင်ခြင်း ၂၆-၉-၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ အမှတ်(၁)၊အမှတ်(၂)၊ အမှတ်(၃)
၅၃ မကွေး ဂန့်ဂေါ ​ချောင်းကူး ကျော-၁ ဂန့်ဂေါ မြို့တွင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းရှင်းလင်း ခြင်း၊ Connection Point များပြုပြင်ခြင်း ၁၉.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ ဇာဟောကျေးရွာ၊
၅၄ မကွေး ဂန့်ဂေါ ​ချောင်းကူး ကျော-၁ ဂန့်ဂေါ လက်ပန် သစ်ပင်သစ်ကိုင်းရှင်းလင်း ခြင်း၊ Connection Point များပြုပြင်ခြင်း ၂၀.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ အမှတ်(၃၇၁)
၅၅ မကွေး ဂန့်ဂေါ ​ချောင်းကူး ကျော-၁ ကျော ရေမျက်နီ ဖီဒါ သစ်ပင်သစ်ကိုင်းရှင်းလင်း ခြင်း၊ Connection Point များပြုပြင်ခြင်း ၁၉.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ ကျောမြို့ထွေအုပ်ရုံး၊ MPT Tower ၊ ထီးလင်း
မြို့နယ်ရှိ ရေမျက်နီနှင့် ရေပုတ်
၅၆ မကွေး ဂန့်ဂေါ ​ချောင်းကူး ကျော-၁ ကျော ကျေးရွာ ဖီဒါ ကြက်ရိုးဓာတ်အားလိုင်းအား သစ်ပင်သစ်ကိုင်းရှင်းလင်း ခြင်း၊ Connection Point များပြုပြင်ခြင်း ၂၇.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ ကြက်ရိုးရွာ၊ ဇမ်မွှေး၊ လယ်ဓမ္မရွာ၊ ဖုန်းစိုးကြယ်ရွာ၊ ဝါးပင်ရွာ၊ ခေါင်းတင်ရွာ
၅၇ မကွေး ထီးလင်း ​ချောင်းကူး ထီးလင်း ဖီဒါ-၂ ထီးလင်းမြို့အထွက်မှ Sectionalizerပိတ်၍ အကြည်ဘန်း11kV
လိုင်းအား သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ရှင်းလင်းခြင်း ၂၀.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ အကြည်ဘန်း၊ အလယ်ဘန်း၊ အညာဘန်း
၅၈ မကွေး ဆော ​ချောင်းကူး ကျောက်ထု-
ဆော ဆောခွဲရုံ ဖီဒါ-၁ ဆောနှင့်သီးကုန်း
ကျေးရွာ ကြား ၁၁ကေဗွီ ACSR Jumper Connection အား AWOCဖြင့်အစားထိုး လှဲလှယ်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ပါမည် ၂၆.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၂:၀၀ ၄:၀၀ တောင်ဘို့ကြီး၊ လောင်းရှည် ၊မြို့သစ်ရွာ
၅၉ နေပြည်တော် တပ်ကုန်း ရွှေမြို့ တပ်ကုန်း ငွေတောင် သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း ၁၄.၉.၂၀၂၀ ၉:၀၀ ၁၂:၀၀ ၃:၀၀ တပ်ကုန်း၊ ရမည်းသင်း
၆၀ နေပြည်တော် တပ်ကုန်း ရွှေမြို့ Project M/O Project M/O သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း ၁၅.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၃:၀၀ ၅:၀၀ ကပစ(၁)၊ ကပစ(၄)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဓာတ်အားပိတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသော ဓာတ်အားလိုင်း/ခွဲရုံများစာရင်း
၆၁ စစ်ကိုင်း ပင်လည်ဘူး ကျောက်ပုထိုး ကောလင်း- ဝန်းသို- ပင်လည်ဘူး ပင်လည်ဘူး - ဓာတ်အားခွဲရုံအဟောင်းအတွင်းရှိ Switchgear Panel များအား Control Building အသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဓာတ်အားပေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ၁၅.၉.၂၀၂၀ ၈:၀၀ ၁၇:၀၀ ၉:၀၀ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ကျေးရွာ ၆၆ ရွာ